Buy PediSpin As seen on Tv (7,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
PediSpin As seen on Tv
ခြေလေး၊ လက်လေးက အသားမာ တွေကို ၅မိနစ်လောက်
အချိန်ပေးရုံနဲ. နူးညံ့သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီ ပါဝါနဲ. အသုံးပြုရတာ ဖြစ်ပြီး အမြန်နှုန်း နှစ်ခုနဲ.
ဈေးနှုန်း ~ 7000 kyats
အမည်: PediSpin As seen on Tv